19 May Safarka Baaskiilka ee Madaxweyne Soyer | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir19 Maajo Socdaal Baaskiil oo laga keenay Madaxweyne Soyer
safarka mayler ee madaxweyne soyer
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer ayaa ka qeyb galay xuska sanadguuradii 19aad ee 101 May Xuska maalinta Atatürk, Maalinta dhalinyarada iyo Isboortiga iyada oo loo eegayo cabirka Corona ee baaskiilka. Madaxweyne Soyer wuxuu bilaabay dabaaldeggan 07.00, ka dib markii uu ku hoyday fagaaraha Atatürk ee ku yaal Fagaaraha Cumhuriyet. Ixtiraamkiisii ​​kadib, Madaxweyne Soyer wuxuu mar kale tegey Sasalı Wildlife Park, oo 33 kiiloomitir u jirta, baaskiil.
Bishii Meey 19, 1919, sanadguuradii 101aad ee Gazi Mustafa Kemal Atatürk iyo asxaabtiisa oo Samsun kula wadaagaya Bandırma Ferry waxayna bilaabeen Dagaalkii Qaranka waxaa lagu dabaaldegayay Izmir iyada oo lagu gudajiray qaab dhismeedka cudurka. Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer ayaa yimid taallada Atatürk oo ku taal fagaaraha Cumhuriyet saacaddu markay ahayd 19:07.00 subaxnimo ee XNUMXka May xuska maalinta Atatürk, Dhallinyarda iyo Ciyaaraha, oo ay soo bandhigeen Hogaanka Sare ee dhalinyarada. Madaxweyne Tunç Soyer, oo ka tegay xuska asaga oo matalaya shacabka, wuxuu sameeyay daqiiqad aamusnaan ah.
"Waxaan ka tagi doonnaa Turkiga dhalaalaya"
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu aaday Beerta Duurjoogta ee Sasalı, oo 33 kiiloomitir u jirta halkaan. Madaxweyne Soyer ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay “May 19 waa runtii maalin weyn oo muhiim u ah Jamhuuriyadda Turkiga. Tallaabooyinka ugu horreeya ee aasaaska sidaas darteedna waa mid aad u xiiso badan. Gaar ahaan sida 'Azerbijan' .. Sababtoo ah İzmir waa magaalada aasaaska iyo xoreynta. Oo waxay weligeed qaadan doontaa kibirka weligiis. Annagoo ah dadka ku nool magaaladan, waxaan qaadnaa kibirkaas. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa dhammaan dhallin-yarada munaasabadaha ciidda ah waxaanan u rajaynayaa in awoowayaasheen ay dhaxalkooda uga tagaan carruurtooda ayeeyadood. Waxaan ku dadaali doonnaa intii karaankeena ah. Waan sii shaqeyn doonnaa ilaa inta neefteenu u dambeysa. Fudud oo ka tagaya Turkiga, ayuu yidhi.
Wicitaan loogu talagalay wadiiqooyinka baaskiil wadayaasha
Duqa Magaalada Soyer wuxuu hadaladiisa kusii waday wado baaskiil ah: “Dowlada Izmir Metropolitan Municipal waxay leedahay wadad baaskiil oo aan kala go 'lahayn oo 42-KM ah. Waxay ka bilaabataa İnciraltı ilaa Sasalı Parklife Park. Waxaan soo marnay wadadaas maanta. Runtii waa waddo aad u wanaagsan. Waxaan ku casuumay qof walba, dhammaan baaskiilleyda iyo kuwa jecel baaskiilka inay sahamiyaan raadkan. Runtii, waa ubad weyn Izmir. Sidoo kale waa raad aad u xiiso badan oo xiiso leh. Si aan caadi ahayn u qurux badan, lush. Dabeecad cajiib ah. Gaar ahaan ka dib Bostanlı, waxaad la kulmaysaa olol. ”
Wuxuu ku quudiyay gacmihiisii
Markii dambe, Madaxweyne Soyer, oo ku warwareegay Xayawaanka Duurjoogta ah, wuxuu ku quudin jiray xoolaha gacmihiisa. Madaxweyne Soyer wuxuu baaray Machadka Sasalı Cilmiga Xasaasiyadda Beeraha ee Machadka Beeraha iyo Cilmi baarista, oo loo dhisay dhinaca midig ee Beerta Duurjoogta. Maareeyaha Duurjoogta Sasalı Şahin Afşin wuxuu siiyey Madaxweyne Soyer ukun dhab ah ostrich leh libaax. Duqa Magaalada Soyer waxaa wehliyay Buğra Gökçe, Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose, Hakan Orhunbilge, Madaxa dhalinyarada iyo isboortiga, Heval Savaş Kaya, Maareeyaha guud ee İZBETON.
Baaskiil ayaa soo degaya garoonka Palandöken
Waxqabadka loogu talagalay baaskiilada ee kuyaala metro
Wadada tramhafka ah ee Eskisehir ayaa wakhti halis ah u ahayd muwaadin
Baaskiiladihii burburay ee Adara ayaa geeriyooday
Baaskiiladu waxay ku dhufteen tareenka xamuulka qaada ee Osmaniye ku dhintay
Wiil Baaskiil ah ayaa ku dhuftay Kayseri
Tareenka rakaabka ayaa ku dhuftay wiil baaskiil ah oo dhintay
Beerta Duurjoogta ee Sasalı
Gaadiidka carruurta ee nostalgic oo la socda bandhiga
Carruurta Malatyada waxay ku tababartaa safarka
Ardaydu waxay qaadan doonaan safarro Balkan leh tareen
Muddada Baaskiilka ee Baaskiilku wuxuu ka bilaabay SAMULAŞ
Soma looma iloobin Jidka tareenka ee Kağıthane